Salaamu Calaykum Dr or Drs,
Magacayga waa Ismail, waxaan isku arkay dhabar xanuun mudo 6 sano ka hor ah, ka hor ma qabi jirin dhibaatadaas, dhaqtar waliba oo aan tago kaniini uun buu isoo siinayaa mooyee, cudurkii wali waa sidiisi oo rajo malaha.
Talo isiiya sideen ku helaa caafimaad ilaaheey ka sokow.
Walaal Ismail, ilaah caafimaad haku siiyo, dhabarkaagane 6 bil ka hor siduu ahaane allaha kaaga dhigo.
Walaal anagu waxaan awoodnaa inaan fikrad guud kaa siino waxa dhabar xanuunku uu yahay, waxyaabaha keeno, sida loo baaro, sida loo daaweeyo iyo sida looga hortagaba.
Awood uma lihin inaan daawo qorno ama baaritaano aan kuu dirno, lakin jawaabtaydan waxa ay kugu saacidi kartaa in aad safiican u fahanto dhibaatada ku haysata nooca ay tahay, iyo markaad dhakhtar u tagto, inaad safiican ugala sheekaysan karto dhibaatada ku haysata, uu kaa dhaadhiciyo sida ay wax u jiraan, uusan kaniini kuu qorin kaliya, baaritaano inaad sameysane waa qasab, si loo ogaado waxa kuu keenay dhabar xanuunka iyo sida ugu haboon ee loola tacaali karo.
• Isticmaalka daawooyinka ka hortagga holaca iyo xanuun-dilayaasha (marka koowaad kala tasho farmashiistaha ama Takhtarka Guud);
• Sii wadidda waxqabadyada caadiga ah halka ay ka suurto gasho;
• Daawaynta osteopath-ka, chiropractor-ka, jir-jimciyaha, amacirbad-durid adeegsadaha ee ah xirfadlayaal ayaa kaa caawini karaan, waxay kale ay daraasaadka muujiyeen in talada ah in la raaco waxqabadka inay u tahay waxtar jirdhismeedka xanuunka fudud;
• Sii wad shaqada, ama si degdeg ah uga soo laabo haddii ay suurto gal tahay;
• Waxaa fiican inaad ku nasatid sariirta in aan ka badnayn labo maalin, in ka bdan waxay keeni kartaa waxtar xumo;
• Sameey layliga jimicsiga si loo xoojiyo murqaha iyo si loo simo dhinacyada;
• Isticmaal kuleel (warqad kulul ama qubays kulul) ka dib maalmo markii uu dabco xanuunka murqaha;
• Waxaa ku caawini karo qalabka ah ultrasound (kumbuyuutarka) si loo yareeyo holaca.
Si uusan kuu qaban dhabar xanuunka waa inaad yaraysaa murugada saa’idka ah iyo dhibaatada dhabarkaada, aadna sugtaa inuu dhabarkaada noqdo mid xoog iyo fudeed leh. Waxaa kale lagu dabaqayaa talada dhabar xanuunka joogtada ah, lehna dhacdooyinka
• Sameey layliga jirdhiska si aad u sii hagaajisid dhabarkaada iyo murqaha calooshaada,
• U sin si fiican dhinacyada jirkaada,
• Ku seexo sariir iyo joodari fiican,
• Sax qaadista iyo gacan ku qabadka alaabaha,
• Weecashada adkaynta iyo isgalka muruqa ee kediska ah
• Sameey jimicsi joogto ah (socod ama dabaalasho waxay u fiican yahiin kuwa qabo dhabar xanuunka).
Hadii aad qabto su'aalo ama aad u baahantahay faahfaahin dheeraad ah, halkaan ku waydii.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka gaarka ah ee aad isiisay, balse sida aan wax u rabay iima aadan sheegin oo waayo anigu dhibka i haysto ee dhabar xanuun wuxuu soo jiitamaye mudo 6 sano ah, balse anigu ma heli karaa talo fudud ee aan ugu tagi dhaqtar si aan ugu sheego cilada deedna aan durbaba ka boodo?
Walaal Gariile, 10-kii qofba 8 ayaa dhabar xanuun ka sheegata!
Dhabar xanuunkana waxaa keena waxyaabo badan, adiga waxa kaliya aad noo sheegtay waa mudada dhabarka uu ku xanuunayay taasina laguma sheegi karo inaad ka boodi kartid iyo in kale waxa loo baahanyahay waa wareysi dheer iyo baaritaano sida uu sheegay ninka iga horeeyay.
Dhabar xanuunka waxa uu ka dhalan karaa, mushkilad ka jirta murqaha, neerfaha, lafaha amaba kalabaxyada yaryar ee laf dhabarta, mid walba oo iyada kamid ahina si gooni ah ayaa loo daaweeyaa.
Talada aad dhakhtarka kula tagaysid waa inaad u faahfaahisaa xanuunka ku hayo, sida uu ku bilawday, inuu ka sii daray, waqtiyada uu daranyahay, haduu dhaqdhaqaaqa ama fadhi ka istaagida ay kuu darantahay, hadii ay jiran waxyaabo aad samaysid si xanuunka uu kaaga yaraado, shaqada aad qabato, daawooyinka aad qaadato, hadii xanuuna kale la socdaan, hadii qoyskaaga uu jiro qof dhabar xanuun noocaada oo kale qaba iyo warbixino noocaas oo kale oo dhakhtarkaaga ku waydiin karo.
Walaal ka boodida dhabar xanuunka kuma xirna mudada uu ku hayay, dhabar xanuunada qaar ayaa lagu daaweeyaa daawooyin, jimicsiyo, amaba qaliin, taasina waxaa xadidaya dhakhtarkaaga.
Waxaan filayaa inaan kaaga jawaabay su'aashaada.